Oogada dhagaynin dhimatay Fabric for Warshadaha Board Circuit Daabacidda - Shiinaha Jiangsu KingRay darka
Dhimatay Fabric, laga sameeyey oo dhimatay dahaarka maro galaas ee dhumucdiisuna waxay of 0.15mm, sida waraaqaha loo sii daayo ee soo saaridda oo looxyada ku wareeg daabacan
Waa maxay PTFE Glass Maro?
dhar dhimatay laga sameeyey oo Maro adag oo tayo sare leh, oo lagu cufay la waxyaabaha dareeraha ah PTFE-waxqabadka sare, haddii ay taasi ku, PTFE this dahaarka dhar Maro leeyahay faa'iidooyinka ah heerkulka sare iska caabin ah oo dusha dhagaynin.
Faahfaahinta of dhar Telfon dahaarka
Culayska (g / m2)
Xoog siligga (N / 5cm)
kulaylka Sare ee iska caabin ah, hantida sii daayo fiican inta lagu jiro heerka -70-360C
dusha ul Non, wax dhaqmayso dushiisa waa u fududahay si aad u nadiifiso
caabin daxalka Chemical
khilaaf deggan iyo hooseeyo qaabeedka
Microwave iyo UV iska caabin
ansixinta FDA nad LFGB, waxaa loo isticmaali karaa sida dalaka foornada, derin BBQ
Sida loo isticmaalo sheet dhimatay?
Sida sheet sii daayo ee soo saaridda of dabacsan guddiga circuit daabacay (qoyska), lagu taliyey 0.15mm
film Rlease for cimlibaadhista of cell in industry qoraxda, lagu taliyey 0.25mm iyo 0.35mm
Sameeyey si fusing suunka mishiinka loo isticmaalo quwad bac, lagu taliyey 0.13mm
suunka Conveyor geedi socodka xirxirida warqad ku guntay, lagu taliyey 0.25mm
Sida dalaka foornada, dalaka dubista foornada rootiga, lagu taliyey 0.11mm, 0.13mm, 0.20mm
Dhigay barkin dhimatay daabacaadda dhar, lagu taliyey 0.11mm
Maxaad our Non-ul & Heat caabida PTFE Maro waa ka xoogbadan, ee suuqa this?
Haatan waa inaan 13 mashiinada daahan, iyo 24 saacadood socda, taas oo ka dhigaysa noo qiimaha wax badan oo la dhimay.
Oo annaguna waxaannu u tidicdo qaar kamida Maro adag xoog nafteena, la DORNIER Machine jare Jarmal ugu fiican, iyo qaar ka mid ah iibsan fiber galaas-qabadka sare ka Taiwan iyo CPIC.
Qoraalkani wuxuu ku PTFE waxaan isticmaaleynaa waa 100% laga keeno Dupont & Dakin PTFE.
Oo haatan waxaan ka iibiyo in ka badan 100 dal oo waxaannu la tegaynaa PTFE Maro.
Waxaan leenahay Noocyada Full of PTFE Fabric dahaarka leh, iyadoo qiimaha tartan rasmi ah oo wax soo saarka oo tayo sare leh.
PTFE Maro , oo dhumucdiisuna waxay ka bilowda 0.06mm in 1mm, waxaa laga yaabaa galay Anti-guurto ah, daadata, siman, xanafta leh , oo waa inaad u samaysaa galay Dark Brown, Light Brown, White, Black iyo midab kale colorized.
Tape PTFE , oo dhumucdiisuna waxay ka bilowda 0.08mm in 0.30mm, iyadoo ugu fiican Dow-Corning silikoon koollo.
PTFE Belt , sida Suunka Open mesh, Suunka PTFE Maro, Suunka lahayn Suunka la Joint iwm
PTFE Mats & dalaka cunto , sida BBQ Mat, foornada dalaka iyo wixii la mid ah.
: Previous PTFE dahaarka maro Maro adag for mashiinka laminating Leather
Next: Dhar aad u fiican Release Property Non eekoow PTFE dahaarka
dhimatay Laminator Release Maro adag Fabric